Home SORATRA FOTOTRA FOOTBALL SOUTH AMERIKA Mpilalao Football any Brezila Danilo da Silva Tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa
Ny LB dia manolotra tantara iray manontolo momba ny lalao baolina kitra izay fantatra amin'ny anarana "Dan". Ny tantaran'i Danilo da Silva ny tantaram-pitiavan'olon-tiana mihoatra ny zava-misy tsy fantatra dia mitondra ny fitantarana feno momba ny zava-mitranga misy hatramin'izay hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviany, ny fiainam-pifandraisana, ary ny zavatra hafa momba ny OFF-Pitch (kely fantany) momba azy.
Eny, fantatry ny olona rehetra ny endriky ny vatany. Na izany aza, vitsivitsy ihany no mahalala zavatra momba ny Bio Bio Danil da Silva izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Danilo da Silva Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Voalohandohan'ny fiainana
Manomboka eo, Danilo Luiz da Silva no anarany feno. Izy dia teraka tamin'ny andro 15tio 1991 tamin'ny reniny, Maria José da Silva sy ny rainy, José Luiz da Silva ao Bicas, tanàna breziliana ao amin'ny fanjakan'i Minas Gerais.
Ny fonenan'i Danilo dia manana fototeny avy amin'ny foko mainty breziliana izay manana tantara manavakavaka sy ady ho an'ny toerana ao amin'ny fiarahamonina Amerikana Atsimo. Ireo Breziliana mainty matanjaka toa an'i Danilo izay efa nirotsaka izao dia mandry amin'ny mariazy mifangaro izay miteraka hodin-jazakely.
Nihalehibe tao Bicas i Danilo, tanàna kely misy mponina 13,000 ary manodidina ny 3 ora avaratr'i Rio de Janeiro.
Bicas araka izay aseho etsy ambany dia teboka mahafinaritra ho an'ny mpifindra monina italiana ary firenena nasionaly.
Danilo da Silva Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Start Career
Ho an'ny tanora Danilo, ny fikasany ho mpilalao baolina kitra dia tonga tamin'ny alalan'ny fanentanana azony avy amin'ny legendary Edson Arantes fa Nascimento izay fantatra amin'ny hoe hoditra.
Nipoitra tao an-tanàna izay nahitana ny fahabangana tamin'ny lalao baolina kitra, mora ho an'ny tanora Danilo ny fifidianana baolina fa tsy mandeha mianatra. Ny tsara indrindra dia i 13 taona i Danilo tamin'ny fotoana noraisiny tamina baolina kitra. Ny fahatsapany ho an'ny baolina kitra dia nahita azy tao amin'ny 2004 nisoratra anarana tao amin'ny ekipa tanora ao an-toerana, Tupynambás izay nanome azy ny sehatra hanehoana ny talentany. Raha ao amin'ny klioba, ny fianarana ny varotra ny modely nomeny sy ny mpandresy roa tonta hatry ny ela Cafu Ny fampisehoana azy dia nampianatra azy ny fomba tsara kokoa ny toerany.
Taorian'ny roa taona nipoitra ny laharana baolina kitra rehetra tao Tupynambás, nahatsapa i Danilo fa ilaina ny milalao baolina kitra. Nanapa-kevitra ny hiverina amin'ny fahitalavitra América Mineiro ao Belo Horizonte izy. Nahita ny klioba i Danilo ho toy ny fitsangantsanganana izay hitondra azy ho amin'ny fahombiazan'ny asa fahombiazan'ny tanora.
Danilo da Silva Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Mitsangàna mba ho ankizilahy
Danilo tamin'ny taona 18 dia nanatontosa ny asany tamin'ny fahatanorany ary navotsotra tany amin'ny sehatry ny seranan'i América Mineiro. Nitsangana teo ambonin'ny laharana rehetra amin'ny lalao baolina kitra izy taorian'ny fanatratrarana tanjona manan-danja ho an'ny klioba.
Tsy ela talohan'ny niantsoana an'i Santos no nantsoina hoe giant Santos. Ny fiposahan'ny moron-dranomasin'ny Danilo tao Santos dia tonga tamin'ny fotoana mety. Tonga izy tamin'ny fotoana nandosirany ny tanjona izay nahazo ny 2011 Copa Libertadores (ny Amerikana mitovy amin'ny Ligin'ny UFA - voalohany indrindra hatramin'ny 1963). Ity ambany ity ny sarin'i young super Danilo ao amin'ny voninahitra Copa Libertadores.
Hatramin'ny nahazoany ny Copa Libertadores teo anilany Neymar (sary etsy ambany miaraka amin'ny tropika), ny fahaiza-manaon'i Danilo nanan-daza dia nanjary nivantana mivantana tamin'ny fomba nandaharany ilay baolina.
Nisy ekipa eoropeana marobe koa nahamarika azy. Tahaka ny varavarankelin'ny famindrana 2012 tamin'ny Janoary, dia nanomboka niantso ny serivisy ny klioba avy any Eoropa. Na eo aza ny fepetra famoahana mavesatra € 50 tapitrisa napetraka teo amin'ny lohany, ny FC Porto nialoha ny hanasonia azy, nandoa ny fepetra henjana ary nanao sonia fandoavam-bola. Izany no nahatonga ny nofinofiny Eoropeana. Ny ambiny, (fotoana ao Real Madrid sy Man City) araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Danilo da Silva Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Relationship Life
Ao ambadiky ny lehilahy lehibe rehetra, misy vehivavy tsara, na izany no fitenenana. Tao aorian'ny fahombiazan'i Danilo, nisy ankizivavy sipa mahafinaritra iray tao amin'ny Clarice Sales (sary etsy ambany miaraka amin'ny lehilahy) izay nanova ny vadiny malalany tatỳ aoriana.
Samy nanapa-kevitra ny hanan-janaka alohan'ny fanambadiana ireo mpankafy roa ireo. Nanan-janaka lahy izy ireo, Miguel tamin'ny 9th of April, 2015. Ity ambany ity dia i Danilo miaraka amin'ny vady tsara tarehy ary i Miguel vao teraka dia mankalaza ny sary voalohany nalainy avy tamin'ny rainy.
Taorian'ny taona 7 niarahana, dia nahatsapa i Danilo sy Clarice Sales fa tonga ny fotoana hanamboarana ny knot. Izy ireo dia nanambady tamin'ny andro 17 tamin'ny 2017 June tany Bicas, Brezila.
Samy nanana ny fampakaram-badiny aloha ry Danilo sy Clarice noho ny daty nomanin'izy ireo. Nanombohany ny datin'ny fampakaram-bady tamin'ny Jona 30, 2017, saingy nanapa-kevitra izy ireo fa hitranga amin'ny andro 17 tamin'ny volana 13 andro talohan'ny datin'ny fampakaram-bady.
Ireto ambany ireto ny sary fampakarambady miaraka amin'i Miguel zanany. Araka ny hita etsy ambany, ny mpikambana rehetra ao amin'ny fianakaviana izay ahitana an'i Danilo tsikitsiky dia fohy kokoa noho ilay mofomamy goavambe goavana.
Mino i Danilo fa i Miguel zanany (sary etsy ambany) no hitarika ny taranaka baolina faharoa an'ny Danilo Luiz da Silva Family.
Danilo's LifeStyle: Raha tsy misy isalasalana, ny fomba fiainan'i Danilo izay afaka manampy amin'ny fananganana sary tsara indrindra ny toetrany. Ny Danilo dia efa hita matetika ary miara-misakafo tsara.
Danilo da Silva Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Fiainana manokana
Manomboka eo, i Danilo dia hita avy amin'ny mpankafy toy ny olona iray izay mijery lalindalina kokoa sy ny sary miaraka amin'ny fianakaviany.
Vokatr'izany, i Danilo dia mety ho diso hevitra tahaka ny olona iray izay mety manana toetra miavaka. Na izany aza, mirona lalindalina kokoa isika, manome anao zavatra momba ny toetrany.
Ny heriny, i Danilo dia hitan'ny olon-tiany ho toy ny olona iray izay mihazona mafy izay zavatra manan-danja aminy. Miharihary izany amin'ny fomba itodihany amin'ny fianakaviany araka ny hita eo amin'ny sary momba ny fiainany.
Danilo dia tena miboridana (eo andaniny), tsy mivadika (amin'ny ankapobeny ny vadiny). Raha ny zavatra tiany, Danilo dia mpankafy fialam-boly any an-trano. Tiany ny miala sasatra eo akaikin'ny rano ary misakafo tsara amin'ny fianakaviana. Ny famantarana ny tato amin'ny hazo fijaliana eo amin'ny sandriny etsy ambany dia maneho fa avy amin'ny fianakaviana katolika izy.
Raha ny zavatra tsy tiany, i Danilo dia tsy mahazo aina amin'ny vahiny. Tsy tiany ny fanakianana ny ray aman-dreniny ary mampiseho ny fiainany manokana amin'ny vahoaka izy. Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, kely dia fantatra amin'ny rahalahiny, anabaviny, dadatoa ary nenitoa.
Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity, i Danilo izay mpanan-karena dia manana lanjany mihoatra ny $ 21 tapitrisa. Na dia teo aza ny modely nomen'i Cafu, i Danilo dia nanantitrantitra izao manaraka izao tamin'ny teniny;
Izaho no anjarako. Tsy hampitaha ny tenako amin'ny olona aho satria manana ny toetrako manokana.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra ny famakiana ny tantaram-piainan'i Danilo da Silva momba ny tantaram-pitiavam-pitiavana bebe kokoa. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery tsara ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, azafady azafady ny fanamarihanao na manontania anay !.
Ny tantaram-pitiavan'i Marquinhos Childhood Plus untold
Ny tantaram-piraisan'i Felipe Anderson momba ny tantaram-pitiavam-bahaolana tsy hita isa
Anderson Talisca Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Vinicius Junior Childhood Tantara mbola tsy fantatra momba ny tantaram-piainana
Arthur Melo Childhood Story Plus tsy azo fantarina
Ny tantaram-pitiavan'i Fabinho ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Alex Sandro tantaran'ny tantaram-piainan'ny tantara momba ny tantaram-pahaterahana
Ny tantaram-piainan'ny Rivaldo Childhood Plus Untold